Fanazavàna teny malagasy ambara, aseho amin'ny teny: Izao no lazaiko aminareo [Rajemisa 1985]
Fanazavàna teny anglisy to be said [Richardson 1885, Hallanger 1973]
Fanazavàna teny frantsay qu'on dit [Abinal 1888, Hallanger 1974, Rajaonarimanana 1995, Beaujard 1998]
5 Angaha misy izany valopolo lazainao izany akory ny vola mba natolony anay! [Andraina: Mitaraina, takila 100]
9 Lazain' ny lovan-tsofina fa izay efa nigoka tamin' ny ranon' i Manangareza, hono, tsy maintsy miverimberina ao Toamasina foana, na aiza na aiza toerana onenany [Andriamalala: Ranomasina, takila 13]
Fanazavàna teny frantsay sujet (grammaire) [Rajaonarimanana 1995]
Fanazavàna teny malagasy vohitra iray isan-ny lehibe amin-Avaradrano, miorina tsy lavitra an-Antananarivo. Raha avy ao an-drenivohitra no miala ka manaraka ny lalana mianavaratra mankany Ambohimanga, rahefa tonga amin-ny kilaometatra faha-14 dia misy sampanan-dalana mivily miankandrefana, ary 1 km avy eo i Lazaina. Tamboho avo, voarafitra mafy no mamefy ny tanàna, ary maro ny trano vaventy ao. Nanan-daza io tanàna io noho izy niaviana komandy maro tamin-ny tany malagasy.
Nohavaozina tamin' ny 2021/06/04